Njikwa Nchọgharị Nchọgharị Blog | Martech Zone
Anyị lekwasịrị anya dị nnọọ ntakịrị Gingde blọgụ maka Dummies na SEO. Anyị na-elekwasịkwa anya nke ukwuu search engine njikarịcha Ebe a Martech Zone (lee otu edemede na na-ede blog post).
Nke a bụ ihe dị egwu infographic site na nnukwu folks na Moz nke ahụ na-achịkọta ihe ndị bụ isi nke ịmepụta Killer Blog Design nke na-arụ ọrụ nchọgharị kachasị:
Kere site Dawn Shepard n'ihi na SEOmoz
Ugbu a, blọgụ ụbọchị abụrụla otu usoro na SEO iji bulie azụmaahịa n'ịntanetị. Maka nyefere blọọgụ enwere ọtụtụ okwu dị ka ibe akwụkwọ maka blọọgụ, ọdịnaya, asụsụ eji yana ọtụtụ okwu nke na-emetụta ọnụọgụ weebụ na ogo. N'ebe a, ọ dị mma eserese eserese maka ntinye akwụkwọ blog yana ya na-abawanye azụmahịa.
ụlọ njikọ njikọ